‘मलाई प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा छैन’ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘मलाई प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा छैन’
२०७२ बैशाख १३, आईतवार ०२:०६ गते
चितवनका वयोवृद्ध मल्लु महतो भन्छन्…
विस २०१४ सालदेखि चितवनको सौराहामा बस्दै आएका मल्लु महतो थारु जातिका सबैभन्दा वयोवृद्ध व्यक्ति हुन् । उनी चितवन जिल्लाकै जीवित इतिहास हुन् । वयोवृद्ध अवस्थामा पनि उनी अझै सामान्य हिँड्डुल गरिरहेका छन् । बोली प्रस्ट भए पनि कान खासै सुन्दैनन् । आँखाले राम्ररी ठम्याउन सक्दैनन् । एक शताब्दी जीवन व्यतीत गरिसकेका उनमा केही परिवर्तन भएको छैन । २०१४ सालदेखि उनी बस्दै आएको सौराहा परिवर्तन भएको छ । तर, अझै उनी उस्तै छन् । बल घटेको छ, आत्मबल घटेको छैन । परम्परागत संस्कृति र मौलिक पहिचान परिवर्तन भइसकेको छ । आधुनिक भवन, सुविधासम्पन्न होटलहरु र कंक्रिट बस्तीले गर्दा सौराहामा थारु जातिको संस्कृति लोप हुनेक्रममा छ । तर, मल्लु महतो थारु संस्कृतिको धरोहरका रुपमा रहेका छन् । उनैले परम्परा धानेका छन् । नयाँ पुस्तामा थारु संस्कृतिको परम्परा मेटिँदै गएको छ । थारु संस्कृति जोगाउन र सौराहालाई पर्यटकीय क्षेत्र स्थापना गर्ने पहिलो अभियन्ता उनी नै हुन् । उनी थारुको पावनीमा फगुवा, झाम्टाजस्ता गीत अझै पनि गाउँछन् । पहिलो स्टिक डान्स गर्ने थारु अगुवा पनि उनी नै हुन् । उनको सिको छोराहरुले मात्र गरेनन्, थारु समुदायका अन्य युवाहरुले पनि उनको सिको गरे । अहिले सौराहा र यसआसपासका थारुहरुले उनकै सिको गरेर स्टिक डान्स खेल्छन् र त्यसैबाट जीविका चलाउँछन् । पुरानो पदमपुरको बनकट्टाका जमिनदारसमेत रहेका उनी सौराहा आएर पर्यटकीय नगरी बनाउन तल्लीन भए । जीवनका धेरै उकाली–ओराली पार गरे पनि उनी कहिल्यै पद र प्रतिष्ठामा रहेनन् । उनी सौराहावासीकै अभिभावक हुन् । जुनसुकै सामाजिक काममा लागिपर्ने उनलाई विभिन्न संघसंस्थाहरुले सम्मान गर्दछन् । राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्र सौराहा सवारी हुँदा या शिकार खेल्न आउँदा प्रायः पहिला भेट्ने व्यक्ति मल्लु नै हुन्थे । उनले तीनवटा राजालाई स्टिक डान्स देखाएर मनोरञ्जन दिलाएका थिए । राजाको सवारीमा खसीबोका खोज्ने जिम्मा उनैले पाउँथे । उनको साहसिक कार्यहरुप्रति राजाहरुसमेत नतमस्तक बनेको उनी स्मरण गर्छन् । २५–३० वर्षको उमेरमा जिमिदारहरुले राखेको पाँच रूपैयाँको बाजी जित्न गैँडामाथि चढेर हिँडेका व्यक्ति हुन्, उनी । जंगलमा भालुसँग जुधेको अनुभव पनि उनीसँगै छ । उनी भालुसँग जुध्दा गम्भीर घाइते भए । भालुको मुख च्यातेर मुस्किलले बाँचेका थिए । प्रस्तुत छ, उनको जीवन र भोगाइका बारेमा उनका साहिँला छोरा गिरिधारी चौधरीको सहयोगमा चितवन पोष्टका लागि गरिएको कुराकानी ः
१) कति वर्ष हुनुभयो ?
– म १०४ वर्ष भएँ । १९६९ सालमा पुरानो पदमपुर गाविस
वडा नं ८ बनकट्टामा मेरो जन्म भएको हो ।
२) कति सालमा सौराहा आउनुभएको हो ?
–२०१४ सालमा पुरानो पदमपुरवाट सौराहा आएको हुँ । सुरूमा मैले सौराहामा कटेरो बनाएर बसेको हुँ । सौराहामा सामान्य बस्ती थियो, होटलहरु खुलेका थिएनन् ।
३) नेपालका राष्ट्रपतिको नाम थाहा छ तपाईंलाई ?
– बूढो मान्छेलाई कसरी थाहा हुनु, थाहा छैन ।
४) कसको नाम थाहा छ त ?
– अहिलेका प्रधानमन्त्रीको नाम पनि मलाई थाहा छैन । बीबी र गिरिजाप्रसाद कोइरालको नाम थाहा छ ।
४) हिँड्डुल गर्न सक्नुहुन्छ ?
– अलिअलि हिँड्छु । बस्दाबस्दै दिक्क लाग्यो भने गाउँघरतिर जान्छु । तर, मोटरसाइकलमा बस्न पाएँ भने माडीसम्म पनि पुग्न सक्छु ।
५) तपाईं सौराहाको पुरानो मान्छे, पहिलाको सौराहा र अहिलेको सौराहामा के फरक छ ?
छ । मैले सौराहामा यस्तो देख्न पाउँछु भनेर सोचेकै थिएन । सुरूमा मैले गर्दा नै होटल खुलेको हो । तर, अहिले गन्न नसक्ने होटल
भए । सौराहामा सुरूमा खुलेको होटल इलिफेन्ट क्याम्प हो । त्यो २०३० सालमा खुलेको हो । त्योभन्दाअधि २ वटा पसलमात्र थिए, सौराहामा ।
६) सौराहामा पर्यटक भित्र्याउन तपाईंको भूमिका छ भनिन्छ नि ?
– सौराहाका ३५ बिगाहा जग्गाका धनी विक्रम महतो
(तौतारिया)बाट आफूले लिएको जग्गा पनि फेरि फिर्ता दिएर मैले नै २०३३ सालमा सौराहामा होटल खोल्न लगाएको हुँ । त्योभन्दाअघि हरिहर सैँजू र श्यामकाजी श्रेष्ठले मेरै घरमा पर्यटकीय पसलहरु खोलेका थिए । पछि बिस्तारै सौराहामा होटल खुल्न थाले, मैले सहयोग गर्दै गएँ । सुरूमा खुलेको इलिफेन्ट क्याम्पकै कारण पर्यटकहरु आउन थाले । बिस्तारै होटल पनि धेरै भए, पर्यटक पनि आउन थाले ।
७) २०९० सालको भुइँचालो याद छ तपाईंलाई ?
– याद किन नहुनु ? त्यस्तो भुइँचालो नेपालमा फेरि जाँदैन । जमिनै हल्लिएको थियो, घरको त कुरै नगरौँ । मेलापाल गर्न गएका मान्छे उतै ढले, जंगलमा घाँसदाउरा गर्न गएका मान्छे कोही फर्के र कोही फर्केनन् । तर, अहिले मलाई कति मरे र कति बाँचे भन्ने कुराको याद आउँदैन । भुइँचालोमात्र होइन, २०११ सालको बाढी पनि उस्तै
थियो । त्यो बाढीले झन् पूर्वी चितवनको दक्षिणी भेगका सबै घर बगाएर लगेको थियो ।
८) गैँडामाथि चढ्नेजस्तो चुनौतीपूर्ण काम कसरी गर्नुभयो ?
– म असाध्यै बलियो थिएँ । ३०–३२ वर्षको लक्का जवान । जिमदारिया साथीहरुको लहैलहैमा गैँडामाथि चढेको हुँ । यो विसं २००५ सालको कुरा हो । जंगलमा दुईवटा गैँडा जुधिरहेका थिए । हारेको गैँडा खोलामा आएर आहाल बस्यो । ख्यालख्यालमै साथीहरुले गैँडामाथि चढ्न सक्ने पो बलियो त भनेर जिस्काए । म बलियोमात्र होइन, झोँक्की पनि थिएँ । खोलामा आहाल बसिरहेको गैँडामाथि पानीमुनिबाटै गएर चढेको हुँ । माथि चढेपछि गैँडा बुरूक्क उफ्रियो । खोलाबाट बाहिर निस्कने समयसम्म म गैँडामाथि चढेको हुँ । साथीहरुसँग बाजी परेपछि गैँडामा चढ्ने हिम्मत आएको हो । चढेर पनि देखाइदिएँ । उ बेलामा पनि पाँच रूपैयाँको बाजी परेको थियो ।
९) बिर्सिनै नसक्ने अन्य घटनाहरु छन् ?
– किन नहुनु ? मसँग भालुसँग जुधेको अनुभव पनि छ । बलियो भइकन पनि भालुसँगको जुधाइमा म धन्न मरिनँ । विसं २०१७ सालमा जंगलमा म भालुसँग जुधेको हुँ । १० जना साथीहरुसँग म जंगलमा साग टिप्न गएको
थिएँ । १० जनाको नेतृत्व गर्ने म नै थिएँ । साग टिप्नेक्रममा एक्कासि दुईवटा भालु हाम्रो अगाडि आयो । साथीहरु सबै डरले भागे । म एक्लै परेँ, भालुले मलाई आक्रमण गरिहाल्यो । एउटा भालु अल्लि पर थियो । एउटाले मलाई आक्रमण गरेको हो । त्यसले मलाई टाउकोमा हान्यो । मैले भालुको जगल्टा समाएर पछारिदिएँ । त्यो भाग्यो । फेरि पछि अर्को भालु आयो । निकै बेर जुधेपछि त्यसको पनि मुखमा हात हालर मुखै च्यातिदिएँ र त्यो पनि भाग्यो । म रगताम्मे भइसकेको थिएँ । भालुसँगको जुधाइमा बल्ल–बल्ल बाँचेँ । जंगल कटेर खेतमा आइपुगेपछि म बेहोस भएर ढलेछु । साथीहरुले भरतपुर अस्पतालमा लगेर उपचार गरेछन् । त्यतिबेला मलाई डा. मथुरा श्रेष्ठले
बचाएका हुन ।
मैले भुल्नै नसक्ने अन्य दुईवटा घटना पनि छन् । घोडालाई मुड्कीले हानेर थुचुक्कै बसालेको र बाढीले पुरेको माटोमा फसेको जरायोलाई जुरूक्क उचालेर घर ल्याएको छु । त्यो जरायोलाई १० जनाले पनि त्यहाँबाट निकालेर ल्याउन सकेका थिएनन् । म एक्लैले निकालेर बोकेरै गाउँसम्म ल्याएको थिएँ ।
१०) राजपरिवारसँग पनि तपाईंको घनिष्टता थियो रे, सम्बन्ध कसरी विस्तार भयो ?
– राजपरिवारसँग घनिष्ट सम्बन्ध भने होइन । चितवनको जंगलमा शिकार गर्न राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र आउनुहुन्थ्यो । सवारी हुनुभन्दाअधि व्यवस्था मिलाउन राजाकै चरा र बाघ सिकारीहरु मेरो घरमा आएर बस्थे । बाघलाई मार्नुभन्दाअधि चाहिले रागाँपाडाहरु उनीहरुले नै व्यवस्था मिलाउँथे । राँगा र पाडा खोज्ने काममा मैले पनि सहयोग गर्दथेँ । बिस्तारै राजासँग पनि चिनजान भयो । पछि जंगलमा राजाको सुरक्षाका लागि मलाई पनि लैजान थाले । राजाको सवारीको समयमा मलाई एउटा छुट्टै हात्तीको व्यवस्था मिलाइदिन्थे । मैले पनि विश्वास दिलाएर राजा र उनको परिवारको सुरक्षा गरेको
थिएँ । मसँग आर्मीमा जर्नेलहरुको सम्बन्ध पनि राम्रो थियो । उनीहरु मेरा साथी भएका थिए । यो क्रम महेन्द्रदेखि वीरेन्द्रसम्म लगातार चलिरह्यो । पछि चितवनको जंगल राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएपछि राजपरिवारले जंगलमा शिकार गर्ने चलन हटेको हो ।
११) तपाईं थारु समुदायको जिउँदो इतिहास पनि हो । अहिले युवापुस्ताले संस्कृति बिर्सिंदै
गएका हुन् ?
– पहिलाजस्तो अहिले कहाँ छ र ! पहिलाका थारुहरुले आफ्नो संस्कृतिसँग जोडिएको पोसाकभन्दा अरु कपडा लाउँथेनन् । तर, अहिले थारुको पोसाक देख्नै पाइँदैन । पुराना मान्छेले अलिअलि लगाउँछन्, तर अहिलेका युवाहरुले लगाउँदैनन् । तर, आफ्नो संस्कृति बिर्सिनु हुँदैन ।
१२) पहिला थारु समुदायमा जिमदारिया प्रथा पनि थियो रे, हो ?
– थियो, तर अहिले हटेको छ । पहिलाका थारु जिमदारहरुले घरमा कामदार राख्ने र उनीहरुलाई धान–चामल दिने चलन थियो । त्यो राम्रो थिएन, हट्यो । सौराहा पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास हुँदै गएपछि यस क्षेत्रमा यो प्रथा हटेको हो । अहिले कहीँ पनि यो प्रथा छैन ।